Jadwalka saami qaybsiga ee ay heleen Guangdong PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
Waxay ku taal Shaoguan, magaalo cajiib ah oo ku taal waqooyiga Guangdong, Guangdong Pengwei Kiimiko Fiican. Co., Ltd (GDPW), oo hore loogu yiqiin Guangzhou Pengwei Arts & Farshaxanka Farshaxanka ee 2008, waa shirkad tignoolajiyada sare ah oo la aasaasay 2017 taas oo ka walaacsan horumarinta, wax soo saarka, suuq-geynta iyo adeegga. Oktoobar, 2020, warshadeena cusub waxay si guul leh u gashay Huacai Aaga Warshadaha Qalabka Cusub, Degmada Wengyuan, Magaalada Shaoguan, Gobolka Guangdong.
Waxaan leenahay 7 khadadka tooska ah ee wax soo saarka kuwaas oo si hufan u bixin kara noocyo kala duwan oo aerosols ah oo ay ka mid yihiin 2 khadadka waa khadadka aerosols quruxda, kuwa kale waa khadadka wax soo saarka caadiga ah. Ka sokow, waxaan ku takhasusay soo saarista alaabada hawada hawada ee warshadaha, xafladaha iyo munaasabadaha, daryeelka shakhsi ahaaneed, daryeelka guriga iyo daryeelka baabuurta taas oo macnaheedu yahay inaan awood u leenahay inaan soo saarno noocyo badan oo aerosols ah. Waxaa ka sii muhiimsan, shirkadeena waxay leedahay dukaan shaqo oo aan boodh lahayn kaasoo waafaqsan heerka baadhista. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa 6 calaamadood sida XETOURFUL, JIALE, PENGWEI, MEILIFANG, QIAOLVDAO iyo wixii la mid ah, 6 rukhsad iyo 6 xuquuqda daabacaadda software.
Daboolista saamiga sare ee suuqyada caalamiga ah, waxaanu u kala qaybsamay shirkad hogaaminaysa hawada hawada ee Shiinaha. Alaabadayada si fiican ayaa loogu iibiyaa suuqa gudaha iyo dibaddaba kuwaas oo aan daboolin oo keliya magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha laakiin sidoo kale in ka badan 50 waddan oo dibedda ah. Hadafkayagu waa in aanu noqono shirkad hormood ah oo cusub oo ka mid ah qaybaha wax soo saarka oo aanu ka abuurno madal wax soo saar oo saamayn leh aagga hawada hawada ilaa saddex sano.
U hoggaansamaan hal-abuurka tignoolajiyada
Ku-dhaqanka hal-abuurnimada-farsamo-ku-hawlgalku waa istaraatiijiyadeenna udub-dhexaadka ah ee horumarinta. Waxaan abaabulnay koox heersare ah oo leh dufcad aqoon sare leh oo da'yar oo karti leh oo leh karti xooggan oo R&D qof ah. Ka sokow, waxaan sidoo kale leenahay iskaashi ballaaran oo xagga sayniska iyo tignoolajiyada mashaariicda leh jaamacado badan oo si fiican loo yaqaan sida South China University of Technology, Guangdong University of Technology, Shaoguan University, Hunan University of Humanities, Sayniska iyo Technology iyo wixii la mid ah.
Qalabkayaga si fiican u qalabaysan iyo xakamaynta tayada wanaagsan ee dhammaan heerarka wax soo saarka ayaa noo suurtageliya inaan dammaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha. Waxaa intaa dheer, waxaan helnay rukhsad loogu talagalay qurxinta, shatiga wax soo saarka kiimikada khatarta ah, ISO, EN71 iyo ogolaanshaha dheecaanka wasakhaysan. Sannadkii 2008-dii, waxa nalagu abaalmariyay magaca 'shirkadda leh qandaraas ilaalinta iyo credit credit'.
Kiimikada Fine ee Guangdong Pengwei. Co. Ltd waxay si xamaasad leh ku sugaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha ee gudaha iyo dibaddaba u imanaya wadahadalo ku saabsan ganacsi, farsamo iyo iskaashi dhaqaale iyo sidii loo heli lahaa xal-guud.
TAYO SARE, MACAAMIISHA KOWAAD